Nhoroondo yeIndonesia | Matambudziko Emuhondo—Kudzvinyirirwa neJapan
Gore ra1942 richangotanga, masoja eJapan akapinda zvechisimba muIndonesia ndokutanga kutonga. Hama dzakawanda dzaimanikidzwa kuita basa rakaoma rekugadzira migwagwa nekuchera migero mumativi emigwagwa. Vamwe vaiiswa mumajeri ane tsvina uye vaitambudzwa nemhaka yokuti vairamba kupinda muhondo. Hama dzinopfuura nhatu dzakafira mujeri.
Johanna Harp, vanasikana vake vaviri, uye Beth Godenze, shamwari yavo (iri pakati)
Imwe hanzvadzi yechiDutch, yainzi Johanna Harp, iyo yaigara kune mumwe musha uri munzvimbo ine makomo kuEast Java, haina kuiswa mujeri pamakore maviri ekutanga ehondo sezvakaitwa vamwe. Hanzvadzi iyi nevana vayo vatatu vainge vachiri kuyaruka, vakashandisa rusununguko rwavaiva narwo kuti vashandure bhuku raSalvation uye magazini eNharireyomurindi kubva muChirungu kuisa muchiDutch. * Mabhuku ainge ashandurwa aibva akopwa otumirwa pachivande kuZvapupu zvaiva muJava yese.
Zvapupu zvishoma zvakanga zvichine rusununguko zvaiungana mumapoka madiki uye zvaiparidza zvakangwarira. “Pese pandaiva, ndaigara ndichitsvaka mukana wekutaura chokwadi cheBhaibheri nemumwe munhu,” akadaro Josephine Elias (aimbonzi Josephine Tan). “Pandaishanya kudzimba dzevaya vaifarira kudzidza Bhaibheri, ndaitakura bhodhi remutambo wechesi ndichiitira kuti vanhu vafunge kuti ndiri kungoita zvekutamba chesi.” Felix Tan nemudzimai wake Bola, vaiparidza paimba neimba vachiita sevari kutengesa sipo. “Kakawanda taiteverwa nevasori vemapurisa aityiwa chaizvo ekuJapan aidaidzwa kuti Kempeitai,” akadaro Felix. “Kuti tisanyumwirwa, taichinja-chinja nguva dzataienda kunoona vanhu vataidzidza navo Bhaibheri. Pavanhu vataidzidza navo, 6 vacho vakafambira mberi chaizvo uye vakabhabhatidzwa munguva yehondo.”
Kusawirirana Kukuru muJakarta
Hama padzaiedza kutsungirira matambudziko emunguva yehondo, dzakabva dzasangana nemumwe muedzo wainge wakaoma. Hurumende yeJapan yakati vanhu vese vaibva kune dzimwe nyika (kusanganisira vanhu vekuChina vakaberekerwa kuIndonesia) vaifanira kunyoresa uye kufamba nekadhi raiva nemhiko yekuti vacharamba vachitsigira hurumende yeJapan. Hama dzakawanda dzakanetseka dzichifunga kuti, ‘Tonyoresa uye tosaina here kadhi racho kana kuti toramba?’
Josephine Elias nehanzvadzi yake Felix
Felix Tan akati: “Hama dzaiva muJakarta dzakaudza isu taiva muSukabumi kuti tirambe kusaina kadhi racho. Asi takakumbira hurumende kuti tichinje mashoko aiva pakadhi racho aiti, ‘munhu asaina kadhi rino apika kuti achatsigira,’ mauto eJapan kuti ati ‘munhu asaina kadhi rino haasi kuzovhiringidza’ mauto eJapan. Zvakatishamisa kuti vakabvuma, saka tese takasaina makadhi acho. Hama dzaiva muJakarta padzakanzwa nezvechisarudzo chedu, dzakabva dzati tatsauka pakutenda uye dzakarega kubatana kana kushamwaridzana nesu.”
Zvinosuwisa kuti pahama dziya dzekuJakarta dzaiti tatsauka pakutenda, vakawanda vavo vakasungwa uye vakasarudza kusiya chokwadi. Imwe hama yakanga yaramba kusaina kadhi rakanga rachinjwa mashoko, yakapedzisira yava mujeri pamwe chete naAndré Elias. “Ndakakurukura naye nezvenyaya yekunyoresa makadhi uye ndakamubatsira kuti ave nemaonero akanaka,” akadaro André. “Akabvuma kuti vakakanganisa pavakarega kushamwaridzana nesu, saka akandikumbira ruregerero. Takava nenguva yakanaka tichikurudzirana, asi zvinorwadza kuti akafa nemhaka yekuoma kwainge kwakaita upenyu mujeri.”
Hondo payakapera muna 1945, hama nehanzvadzi dzaida chaizvo kushanda nesimba mubasa rekuparidza. Imwe hama yakaiswa mujeri ikatambudzwa, yakanyora tsamba kuhofisi yebazi yekuAustralia ichiti: “Pashure pemakore mana ainge akaoma, ndichiri mupenyu, kutenda kwangu kuchakasimba uye handisati ndachinja pfungwa dzangu. Pese pandaitambudzwa, handina kumbobvira ndakanganwa hama dzangu. Ndapota nditumireiwo mabhuku.”
Mabhuku ainge akatarisirwa kwenguva yakareba akabva asvika munyika. Akatanga kuuya ari mashoma, ndokuzopedzisira ava kuuya akawanda. Vaparidzi 10 vaiva muJakarta vakatangazve kushandurira mabhuku muchiIndonesian.
Musi wa17 August 1945, vaya vaitungamirira pakuunza rusununguko muIndonesia, vakazivisa kuti Indonesia yava kuzvitonga. Izvi zvakaita kuti pave nekurwisana pakati pavo neutongi hweNetherlands kwemakore mana. Vanhu vanosvika makumi ezviuru vakafa munyonganyonga iyoyo, uye vanopfuura mamiriyoni 7 vakatiza vachisiya misha yavo.
Panguva yaitika zvese izvi, hama dzakaramba dzichiparidza paimba neimba. “Vanhu vairwira rusununguko vaiedza kutimanikidza kuti tishevedzere sirogani yavo yokuti ‘Merdeka,’ zvinoreva kuti ‘Rusununguko,’” akadaro Josephine Elias. “Asi takavaudza kuti hatina divi ratinotsigira mune zvematongerwo enyika.” Muna 1949, Netherlands yakadzorera utongi kunyika yayakanga yatonga kwenguva yakareba yeRepublic of the United States of Indonesia (yava kunzi Republic of Indonesia). *
Pakazosvika 1950, hama dzaiva muIndonesia dzakanga dzatsungirira kutambudzwa kwemakore anenge 10. Asi dzaiva nebasa rakakura rakanga rakadzimirira. Dzaizoparadzira sei mashoko akanaka kumamiriyoni akawanda evanhu vaiva muIndonesia? Pamaonero evanhu, zvaiita sekuti hazviiti! Asi, dziine kutenda kwakasimba, hama dzakaenderera mberi nekuparidza, dzichivimba kuti Jehovha aizotumira “vashandi mukukohwa kwake.” (Mat. 9:38) Uye Jehovha ndizvo zvaakaita.
^ ndima 2 Mwanasikana mudiki waHanzvadzi Harp, akapinda Chikoro cheGiriyedhi pashure pehondo uye akazodzokera kuIndonesia kunoshanda semumishinari.
^ ndima 3 Netherlands yakaramba ichitonga muWest Papua (panguva iyoyo yaiva West New Guinea) kusvika muna 1962.
Indonesia: Kudzvinyirirwa Nehurumende yeJapan